Taliyihii Ciidamada Danab oo shaqo joojin lagu sameeyay | KEYDMEDIA ONLINE
Taliyihii Ciidamada Danab oo shaqo joojin lagu sameeyay
Xariga Taliyaha ayaa lala xiriirinayaa in uu ka mid ahaa shaqsiyaadkii aadka ugu dhawaa Ra'iisul wasaare Kheyre.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyihii ciidamada Komaandooska Soomaaliya Ismaaciil Cabdi Maalik Maalin ayaa shaqo joojin lagu sameeyay, iyadoona lagu xiray gudaha Wasaaradda Gaashaandhiga sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Cabdi Maalik ayaa la sheegayaa in uu muddo bil ku dhow uu ku jira xabsi ku yaallo gudaha Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya, ilaa iyo haddana lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeyso xarigiisa.
Macaaluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in Taliyaha lagu ogaarsanayo in ku mid ahaa dadkii aadka ugu dhawaa Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, islamarkaana ay xigto yihiin.
Taliye Cabdi Maalik ayaa mar soo noqday taliyihii ilaalada gaarka ah ee Ex Raiisul wasaare Xasan, iyadoona arintaas xarigiisa lala xiriirinayo.
Dadkii aad ugu dhawaa una badan kuwa ku heybta Ra’isul Wasaare hore ee Soomaaliya ayaa laga soo eryay inta badan Xafiiska Ra’isul Wasaaraha, waxaa sidoo kale xilal ka qaadis hada wajahaya xubno kale oo aad ugu dhawaa Kheyre.